Senior Manager- Sustainability | Job in Myanmar ﻿
HR & Career ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ
အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များကို လူကြီးမင်း၏ အီးမေလ်းသို့
အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားအရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်း အလုပ်များ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ ဝန်ထမ်းခန့်နေသော ကုမ္ပဏီများ
၀င်ပါ / အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Senior Manager- Sustainability
19.4.2020, အချိန်ပြည့် , Energy / Utilities
Company Profile ကို ကြည့်ပါ။
ဤ company ကို Follow လုပ်ပါ။
ad ကို printလုပ်ပါ
ကုမ္ပဏီ: VPower Group Holdings Limited
We provide career development and attractive remuneration package and fringe benefits to the right candidates.VPower Group are one of the world's leading large gen-set system integration providers and Southeast Asia's largest private gasfired engine-based distributed power generation station owner and operator. Under our system-integration business, we design, integrate and sell gas-fired and diesel fired enginebased electricity generation units, or gen-sets, and power generation systems, utilizing our proprietary system designs and integration capabilities, build, lease and, in collaboration with off-takers, operate distributed power generation stations.
•	Develop, implement and manage sustainability/environmental management campaign for the Group in Myanmar;
•	Analyse the environmental performance of power stations’ operation
•	Work with external consultant to carry out and complete the environmental impact assessment projects in Myanmar and reduce the Group’s environmental risks and related costs
•	Identify new initiatives to raise the Group’s profile in sustainability and drive the development of sustainability roadmap and strategy
•	Prepare periodic sustainability/environmental report for the Group’s Myanmar business
•	Other duties to be assigned from time to time
•	Degree holder
•	Minimum of 10years of experience in sustainability or environmental management
•	Excellent command of Burmese and English
•	Strong presentation skills
•	Proficient MS Office Skills
•	Excellent interpersonal and communications skills
•	Self-driven with strong problem-solving and project management skills
•	Willingness to travel on request
ကျွန်တော်တို.ကမ်းလှမ်းသည် •	Male/Female
အလုပ်တည်နေရာ Room 8, 16th floor, Sule Square, Sule Pagoda Road, Kyautada Township, Yangon
နေရာဒေသ: Yangon (Rangoon)
Job details အလုပ်အမျိုးအစား: Senior Management jobs
Company Industry: Energy / Utilities
လူကြီးမင်းသူငယ်ချင်းများအတွက် ထောက်ခံပေးလိုသော အလုပ်များ
3 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Energy / Utilities
We provide career development and attractive remuneration package and fringe benefits to the right candidates.
VPower Group are one of the world's leading large gen-set system integration providers and Southeast Asia's largest private gasfired engine-based distributed power generation station owner and operator. Under our system-integration business, we design, integrate and sell gas-fired and diesel fired enginebased electricity generation units, or gen-sets, and power generation systems, utilizing our proprietary system designs and integration capabilities, build, lease and, in collaboration with off-takers, operate distributed power generation stations.
နေရာဒေသအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Yangon (Rangoon)
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Translator/Interpreter Jobs
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Translator/Interpreter Jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Yangon (Rangoon)
383 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Energy / Utilities
•	Develop, implement and manage sustainability/environmental management campaign for the Group in Myanmar; •	Analyse the environmental performance of power stations’ operation •	Work with external consultant to carry out and complete the environmental impact assessment projects in Myanmar and reduce the Group’s environmental risks and related costs •	Identify new initiatives to raise the Group’s profile in sustainability and drive the development of sustainability roadmap and strategy •	Prepare periodic sustainability/enviro ...
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Senior Management jobs
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Senior Management jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Yangon (Rangoon)
Senior Manager- Sustainability Senior Management Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon VPower Group Holdings Limited Senior Management jobs Senior Management jobs Energy / Utilities မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ
Search best job in Myaung at www.jobless.com.mm. - Exclusive job portal in Myanmar. Apply online today!
Search best job in Paungde at www.jobless.com.mm. Exclusive job portal in Myanmar. Apply online today!
Search best job in Ye at www.jobless.com.mm. - Exclusive job portal in Myanmar. Apply online today!
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များကို အောင်ပါနည်းများဖြင့် ရှာပါ။
ပိုမိုသော အလုပ်များကို ကြည့်ပါ။
Work in ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(929)
Work in မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး(292)
Work in ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(88)
Work in မန္တလေးမြို့(75)
Work in ရှမ်းပြည်နယ်(57)
Work in မကွေးတိုင်းဒေသကြီး(42)
Admin & HR Manager M/F (1)
Recyglo Co., Ltd.
Marketing Manager M/F (1)
Admin & HR Manager
Myanmar First Asia Group
Blue Ribbon Trading Company Limited
ဒီမှာ လျှောက်ထားပါ။ ၄င်းသည် စက္ကန့် ၅၀ သာလျှင် ကြာပါသည်။
ဖိုင်ကို upload လုပ်ပါ။
သင်၏CV ကို တင်ပါ ( DOCX, DOC, RTF, ZIP or PDF format). If you have CV in our system, then it is automatically attached to your application. So make sure it is updated!
လူကြီးမင်းသည် အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များကို လျှောက်ရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား? ပြသနာမရှိပါ။ လူကြီးမင်းနှစ်သက်သည့် အလုပ်ကို နှိပ်၍ " ပေးပို့ပါ" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ကုမ္ပဏီများမှ အင်တာဗျူးအတွက် လူကြီးမင်းအား ဖိတ်ခေါ်ရန် စောင့်မျှော်လျက်ရှိပါသည်။ အားလုံးကို ရွေးချယ်ပါ/ ပယ်ဖျက်ပါ။
Yangon (Rangoon)3နေ့များ
Yangon (Rangoon) 1 နေ့
Yangon Region 1 နေ့
Yangon (Rangoon)2နေ့များ
Yangon Region2နေ့များ
Senior HR Executive (NFF)
Naypyitaw City2နေ့များ
Mandalay City2နေ့များ
Senior C# Programmer
Yangon Region3နေ့များ
Senior Admin & Accountant (ရဲမွန်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်)
Bago Region6နေ့များ
Yangon (Rangoon)6နေ့များ
Senior System and Network Engineer
Yangon Region6နေ့များ
General Manager (Accounting & Finance)
Yangon (Rangoon)7နေ့များ
Deputy Landscape Manager (DTL)
Tanintharyi Region7နေ့များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄င်းကဲ့သို့ တူညီသော အလုပ်များကို ကျွန်ုပ်၏ email တွင် လက်ခံရရှိလိုပါသည်။
OK ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုပုံနှင့်ပက်သက်သည့်စည်းမျဉ်းများကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Jobsinyangon.comသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေးဆိုဒ်တွင် ဦးဆောင်နေပါသည်။ Jobsinyangon.comသည် မြန်မာဈေးကွက်တွင် အလုပ်အကိုင်နှင့်ပက်သက်ပြီး အကြီးမားဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး အလုပ်များကိုလည်း ကမ်းလှမ်း ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းဝင်အရည်အချင်းရှိသာ ဝန်ထမ်းများကိုrecruiter များရှာဖွေနိုင်ရန်ကူညီပေးလျက် ရှိပါသည်။ Jobsinyangon.comသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီများ အားလုံးမှHR Managerများ၊ Recruiter များ အလုပ်များကို အင်တာနက်တွက်တင်ရန်၊ အလုပ်လျှောက်ထားသူများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းခန့်ရာတွင် မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ ချနိုင်ရန်အတွက် ကူညီပေးနေသောJob Board တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်ရှာဖွေသူများသည် ရန်ကုန်နှင့် အခြားသောမြို့များရှိ အလုပ်များကို www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တွင် လွယ်ကူစွာ ရှာနိုင်ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းရှိ အလုပ်များကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး ၄င်းကို Roger Quest International ၏ Branch ဖြစ်သော Executive Search မှ စီစဉ်ပြုလုပ်ပါသည်။
Online တွင် CV ကို ဖန်တီးပါ